Resaka valifaty Novonoin’izy ireo ilay lehilahy namono an-drainy
Ny alatsinainy 3 febroary teo dia nitrangana vono olona feno habibina tao amin'ny fokontany Sarinosy, kaominina Ambanivolo Etrotrika, distrikan’i Farafangana.
Toamasina Haraha-maso ireo mpandraharaha mpanafatra entana
Hifarana anio ny atrikasa fanomanana ireo rafitra hanampiana ny fanondranana ara-barotra ao Toamasina na « Atelier de préparation de la mise en place des structure d’appui au exportateurs ( SAE ) ».
Lalana Soanierana-Tsimbazaza Lehilahy 60 taona voaendaka amin`ny 10 ora maraina
Na dia vao tamin’ny 10 ora maraina aza ny andro dia tsy nahasakana jiolahy telo nanendaka lehilahy iray 60 taona teny Soanierana omaly.
METEO Ampandrianomby “Manaraka teknolojia tsara ny fitaovana ampiasainay”
Nanamarika ny sampandraharaha mpamantatra ny toetr’andro eny Ampandrianomby fa manaraka ny teknolojia tsara ny fitaovana ampiasain’ízy ireo
Aviation civile de Madagascar Ahiana hamotika ny orinasa ny fanavaozana natao
Mbola sary ratsy sarotra kosehina teo amin’ny tantaran’ny fitaterana ana habakabaka eto Madagasikara ny nampiditra antsika tao anatin’ny “Annexe B” ny taona 2011 ary tsy nahafahana niala tao anatin’izany raha tsy ny taona 2016.
Fitombon`ny mponin’Antananarivo Mila miomana ireo kaominina 27 manodidina
Tao anatin` ny 15 taona farany dia mihoatra ny tokony ho izy ny isan`ny mponina ka nitombo avo roa heny izany eto an-drenivohitra.
Tsy fananana karatra, fahamamoana, vaky trano Olona 18 no nosamborina tany Vohemar
Tsy mitsahatra manao fisafoana manerana ny distrikan’i Vohemar ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP any an-toerana.
Tovolahy telo no namono azy ny sabotsy 11 mey 2019 teo Madera Namontana, hoy ny mpomba io kandida io, izay nanameloka tanteraka ny fampiasan-kery toy izao. Nohamafisin’izy ireo fa tena mavitrika sy tsy mikely soroka amin’ny fampandaniana ny kandida laharana faha-3 eny amin’ny Boriborintany faha-4 izy, antony nifofoan’ny mpifanandrina ny ainy. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy i José rehefa niditra tao amin'ny Sampana Vonjitaitran’ny HJRA Ampefiloha. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa hijery ity raharaha ity ny lasibatra. Efa tsy misy ahiana kosa ny ain’ny naratra, ary efa niresaka tamin’ireo mpiara-dia aminy amin’ny fanohanana kandida sy naneho fa tsy mihemotra amin’ny tanjona efa napetraka.